ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ရှိသင့်/မရှိသင့် (လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ်)
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် ရှိသင့်/မရှိသင့် (လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ်)
ဖက်​ဒရယ်​ တိုင်းပြည်​ ဖြစ်​သင့်​ပါတယ်​...ဖက်​ဒရယ်​ စစ်​တပ်​ ဖြစ်​ဖို့က​တော့ ဥပမာ ဆူပူ​သောင်းကြမ်း သူပုန်​ထ​နေတဲ့ KIO လို သူပုန်​​တွေကို အပြီးသတ်​ ​ခြေမှုန်းဖို့လိုပါတယ်​..အဲဒီရှင်းလင်း​ရေးအစီစင်​ ပြီးမှသာ စစ်တပ်​ကို ဖက်​ဒရယ်​ ဖြစ်​​အောင်​ပြုပြင်​သင့်​ပါတယ်​..
Hey Burmese fucking idiot, don't announce your fucking nonsense! Kachin is not rebel, the genuine rebel is your fucking Burmese gangsters(Burmese Army)… take care of yourself, and you should know that Kachin land is notaprovince, and it's just State. And do you
know the exact and genuine meaning of "State".
And you should know, Kachin land is not part of your Burmese emperor of your fucking Burmese kingdoms and dinesties as your fake history of your Burmese motherfuckers!
Brang...မင်း comment ​တွေကြည့်​ရတာ ​သွေးရူး​သွေးတန်း နဲ့ ထင်​ရာ​တွေ ​ရှောက်​​ရေးထားသလိုဘဲ... တပ်​မ​​တော်​ဆိုတာ အစဉ်​အလာနဲ့ တိုင်းပြည်​ကို ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တာပါကွာ... မင်းတို့ ကချင်​​တွေ သူပုန်​ထ လို့တိုက်​ရတာ...
အော သိပါပြီ ဒါဆိုမင်း အ ဖေက စစ်ဗိုလ်လား
ခွေးမသားတွေ ဗမာ နဲ့ ကချင် အချင်းချင်း ကိုက် မ နေကြနဲ့
ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှ အပြစ်မရှိဘူး စောက်တလွဲလုပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် တွေ တောင်း လက်နက် အာဏာ မစွန့်ချင် တဲ့ လက်နက်ကိုင် ခွေးသူတောင်းစား အဖွဲ့ တွေမှာပဲ အပြစ် ရှိတယ်
သန်းရွှေ တို့လိုပဲ အဲဒီ အဖွဲ့ အစည်းတွေလဲ အာဏာရူးတွေပဲ လမ်းဖွင့်ပေးတာကို ငြိမ်းချမ်းရေးမယူချင် ပဲ အာဏာနဲ့ လက်နဲ့ ကို မစွန့် နိုင် တဲ့ ခွေးတွေ
နားမလည်တဲ့ နွားတွေက တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းကိုက် မ နေနဲ့
it will be time to consider this issue that after peace between us can be got and no rebel will exist in our Republic.